Zavatra 9 ho hitanao sy hatao maimaim-poana any Berlin | Vaovao momba ny dia
Zavatra 9 ho hitanao sy hatao maimaim-poana any Berlin
Berlin, tanàna iray voamariky ny tantaran'ny rindrina nampisaraka azy nandritra ny taona maro, lasa tanàna kolontsaina marobe ankehitriny, feno fifanoherana ary ahafahantsika mankafy zavatra maro maimaimpoana. Satria toa lafo ho antsika foana ny dia, fa raha mifantoka amin'ny zavatra rehetra vitantsika isika nefa tsy mikororosy ny paosintsika, dia ho gaga aza isika amin'ireo hetsika marobe izay ananantsika eo am-pelatanantsika.
Any Berlin dia misy maro zavatra hatao maimaim-poana, ka raha io no halehanao manaraka, dia azonao atao ny manoratra ireo zavatra rehetra ireo. Nilaza izy ireo fa maimaim-poana ny tsara indrindra amin'ny fiainana, koa azo antoka fa ho toerana sy hetsika mahaliana tokoa izy ireo. Ankoatr'izay, Berlin dia tanàna ara-kolontsaina iray ary feno habaka samihafa izay hahagaga antsika.
1 Midira amin'ny fitsidihana mitarika anao
2 Tsidiho ireo tranombakoka
3 Tsidiho ny toby fitanana Sachsenhausen
4 Ankafizo ny tsena
5 Mandehana any amoron-dranomasina
6 Jereo ny Fahatsiarovana Holocaust
7 Mialà sasatra ao amin'ny valan-javaboary
8 Jereo ny tanàna avy any amin'ny avo
9 Mandihiza amin'ny toerana manan-tantara
Midira amin'ny fitsidihana mitarika anao
Rehefa tonga any amin'ny tanàna tsy fantatrao ianao, ny tena azo inoana dia hoe te hahita ireo zavatra misimisy indrindra ianao fa tsy fantatrao akory hoe aiza no manomboka. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny misoratra anarana amin'ireo fitsidihana maimaimpoana maimaim-poana, izay misy. Tadiavo ny fitsidihana maimaim-poana any Berlin ao amin'ny Google hahafantatra tsara hoe avy aiza izy ireo, satria imbetsaka isan'andro dia vita amin'ny toerana samihafa sy vondron'olona. Ireo fitsangatsanganana ireo dia hitondra anao any Berlin izay tian'ny rehetra jerena amin'ny fitsangatsanganana izay mety maharitra adiny roa. Indraindray ianao dia mangataka fotsiny amin'ilay mpitari-dia momba ny fizahana rehefa nahavita azy ianao.
Tsidiho ireo tranombakoka
Misy tranombakoka any Berlin izay tsy mila mandoa vola. Ny iray amin'ireo marika famantarana indrindra dia ny Fahatsiarovana an'i Wall Wall, eny amin'ny habakabaka Bernauer Strasse. Ity fahatsiarovana ity dia mifantoka amin'ny tantaran'ny rindrina sy ny fijaliana vokatr'izany tao an-tanàna.
Tsidiho ny toby fitanana Sachsenhausen
Antsasak'adiny mahery miala ny tanànan'i Berlin dia afaka mitsidika an'io toby fitobiana io isika mba hahalalana bebe kokoa momba azy. Famonoana olona nazia tamin'ny jiosy Tamin'ny Ady lehibe faharoa. Ity toby fitanana ity dia misy dia maromaro mandritra ny ora maro izay ilazany aminao ny tantara manontolo momba ny toby fitanana. Zava-dehibe ho an'ireo liana amin'ity ampahany amin'ny tantaran'ny Alemanina ity.
Ankafizo ny tsena
Berlin dia tanàna lehibe izay onenanao be any ivelany. Betsaka ireo tsena misokatra, zavatra hita any amin'ny tanàna eropeana maro. Izy ireo dia toerana tena mahaliana izay ahitanao ireo lahatsoratra taloha, fivarotana hafakely ary koa ireo mpizahatany sasany. Amin'ny Alahady, eo anelanelan'ny 9 maraina ka hatramin'ny XNUMX hariva, afaka mitsidika ny tsena parasy any Revaller Strasse izahay, izay misy ny fivarotana sy fivarotana tena mahaliana.
Mandehana any amoron-dranomasina
Mety mieritreritra ianao fa tsy ho vita izany, satria tsy azo atao ny mitsidika ny torapasika any Berlin satria tanàna any afovoany. Na izany aza, tao Berlin dia nieritreritra ny hamorona zavatra akaiky indrindra amin'ny torapasika izy ireo mba hahafahany mankafy mandeha an-tongotra amin'ny fasika na a lalao volley eo afovoan-tanàna. Ity morontsiraka ity dia eo Stralauer Platz, ary afaka manao hetsika isan-karazany ianao.
Jereo ny Fahatsiarovana Holocaust
Natokana ho an'ny Jiosy avy tany Eropa no namono nandritra ny Famonoana Tambabe. Saika akaikin'ny vavahady Brandenburg izy io. Misy stelae 2.711 misy habe samihafa maneho ny ankamaroan'ireo vono olona ireo. Izy ireo dia mamorona toerana manetriketrika izay ahafahantsika misaintsaina an'io sehatra mainty io amin'ny tantaran'ny Eropa.
Mialà sasatra ao amin'ny valan-javaboary
Berlin dia iray amin'ireo tanàna eropeana izay misy toerana malalaka ho an'ny faritra maitso. Noho izany dia feno zaridaina lehibe ahafahanao mandositra ny asfalta amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana mangina na fankafizanao ny aloky ny hazo. ny Valan-javaboary Tiergarten Io no zava-dehibe indrindra amin'ny tanàna ary miainga avy eo amin'ny vavahady Brandenburg malaza mankamin'ny zoo ao an-tanàna. Ny Britzen Garten dia mahaliana ihany koa, miaraka amin'ireo faritra filalaovana ary trano fisakafoanana mihitsy aza.
Jereo ny tanàna avy any amin'ny avo
Misy toerana maromaro izay ahafahantsika manana fomba fijery mahaliana momba ny tanànan'i Berlin avy any ambony. Amin'ny faritry ny Victoriapark no Kreuzberg, havoana iray metatra 66 metatra izay ahitantsika tsara ny tanàna. Toerana iray hafa izay maimaimpoana tanteraka ary ahitantsika ny tanàna ny trano fisakafoanana ao amin'ny University University of Berlin, izay hita eo amin'ny rihana faha-20.
Mandihiza amin'ny toerana manan-tantara
Mandihiza ao amin'ny Clärchen Ballhaus Efa kilasika izy io, ary zato taona mahery no nisokatra ity toerana ity. Ary raha mpankafy Brad Pitt ianao dia ho fantatrao fa ny sary Inglourious Basterds dia notifirina teto, ka azo antoka fa ho iray amin'ireo zavatra tsy maintsy tazana any Berlin ireo. Izy io dia efitrano fandihizana izay ahafahantsika mankafy fampianarana dihy maimaim-poana koa raha te hanana andro mahafinaritra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Zavatra 9 ho hitanao sy hatao maimaim-poana any Berlin
Antony fitsangatsanganana any Andalusia ary hijanonana velona